ယင်းစစ်သည်တော်များ၏လမ်း - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
မာရီယို Dobrichkov နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ဤပြဿနာကိုအောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း၌သင်တို့ကိုသူ့အိပ်မက်၏ထိပ်တက်ပြီးတက်သူသည်မိမိလမ်းပေါ်သောသူလူငယ်တစ်ဦးတိုက်လေယာဉ်တွေ့ရမယ်။ တစ်ဦးကသူ၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြမည်သူခိုင်မာတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူအားကစား၏အချင်းလူသား,, သူ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်မှေးလုပျငနျးမှစစ်မှန်တဲ့နေဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏နာမမာရီယို Dobrichkov ဖြစ်ပါတယ်။
မာရီယိုမင်္ဂလာပါ! သငျသညျအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်သင်မည်သို့ပြုလုပ်ကျော် enthuse ခဲ့ဘူးစတင်ခဲ့ပြီးပထမဦးဆုံးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာကဘာလဲ
ဟယ်လို! သို့တိုင်ဟာအလွန်ငယ်ရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်, 8-9 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုဟောင်းများကိုငါအလွန်လုံ့လရှိသူကလေးသည်ကြီးနှင့်တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားအချို့ကြင်နာလေ့ကျင့်ရန်အားကစားကလပ် join ဖို့အလွန်ချင်တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်မအတွက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်သောငါ၏ဇာတိမြို့အတွက်များစွာသောကလပ်ရှိ weren`t ။
သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏မိခင်တစ်ဦးဂျူဒိုကလပ်၏နည်းပြသိပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်မတော်တဆဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းပြမာရီယာ Uchkova နှင့်အတူလေ့ကျင့်ပေးဖို့စတင်ယေဘုယျအားဖြင့်ငါချက်ချင်းအားကစားနှင့်ငါကနေလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်အရာတို့ကိုကြိုက်တယ်။ ကျွန်မအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းရရှိရန်စတင်ခဲ့ငါကအများကြီး like နှိပ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းငါနည်းပညာပိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတပုဒ်ကိုခံခဲ့ရပုံကိုကြိုက်တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကအားလုံးကိုဤနည်းစတင်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့သင်ကသင့်ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကအောင်ပွဲနှင့်ဆုတံဆိပ်စုဆောင်းဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ သင်သည်သင်၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပို share ပေးလို့ရမလား?
ကျွန်မကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ကအရမ်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတို့နှင့်ကြီးသောစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးသို့သှားကွ၏နှင့်ဤခြောငါပြိုင်ပွဲအနိုင်ရစတင်ခဲ့ပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသိရသည်။ ဒီအဆဲအမှုနှင့်အောင်ပွဲ ပို. ပင်ငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအတွက်နောက်ထပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ငါ့အလိုဆန္ဒပြင်းထန်လာ။
ငါနှစ်အတွင်းဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အဖြစ်ယောက်ျားကဏ္ဍသောအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အတွက်ငါကောင်းသောအောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါပြီ။ ငါနှစ်ဦးစလုံးအားကစားအတွက်ဥရောပ, ဘော်လကန်ချန်ပီယံရှစ်နှင့် World ဖလားပါဝင်ခဲ့ကြထပ်တလဲလဲဂျူဒိုနှင့် sambo အတွက်အမျိုးသားရေးချန်ပီယံဖြစ်လာကြပါပြီ။ ငါသည်လည်းလေ့ကျင့်နှင့် MMA မှ (ရောနှောကိုယ်ခံပညာ) တွင်ယှဉ်ပြိုင်ငါအပျော်တမ်းအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစည်းအဝေးများရှိသည်ဘယ်မှာ။ MMA မှ၌ငါ့အကြီးမြတ်ဆုံးအောင်ပွဲဥရောပချန်ပီယံရှစ်မှာဒုတိယနေရာဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကို MMA မှရန်သင့်အားဆွဲဆောင်အခါဤအဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ
ကျွန်တော်စခဲ့ပါတယ် လေ့ကျင့်ရေး MMA မှ အနည်းငယ်အကြာတွင်ဇာတ်စင်မှာ။ ငါယခုအထိကျင့်သုံးခဲ့ကွောငျး, တစ်ဦးစာရေးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာကြိုက်တယ်နဲ့ကျွန်မသူတို့ MMA မှကဲ့သို့သောအားကစားအတွက်အလွန်ကောင်းသောအခြေခံဖြစ်ကြောင်းသိသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းအတွက်အားလုံးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာပေါင်းစပ်နှင့်တကယ့်ကိုတစ်ဦးအလွန်လေးနက်သောပြင်ဆင်မှုလိုအပ်သည်တစ်အားကစားဖြစ်ပါတယ်။ မွန်းကျပ်ခြင်းနှင့်နပန်းချုပ်ကစားနည်းများအတွက်လက်, ခြေ, အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်နှင့်အတူသပိတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါရန်ပွဲ3မိနစ်5ကျည်အတွက်ရပ်တည်မှုများနှင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်နှစ်ဦးစလုံးရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ငါသည်ဤနယ်ပယ်များတွင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှငါနှင့်အနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုသိနိုငျအခြားလူတိုင်းကိုပြသချင်တယ်။ ငါ၏အခုနှစ်မှာ ဇာတိမြို့ Yambol ငါနှင့်ယောက်ျားလေးများလေ့ကျင့်ရေးစတင်ရာ MMA မှကလပ်, ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာငါခြွင်းချက်မရှိအောင်ပွဲခဲ့ရပြီးပိုပြီးအလေးအနက်ထားလေ့ကျင့်ပေးရန်, ငါ၏အလိုဆန္ဒတိုးမြှင့်ဘယ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး MMA မှအရည်အချင်း, သည်အထိရှည်လျားယူ didn`t ။ ကျွန်မအနည်းငယ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရနှင့်များအတွက်အရည်အချင်းများ MMA မှဥရောပချန်ပီယံရှစ်, စိန့်ပီတာစဘတ်, ရုရှားနေရာလုယူသော။ အဲဒီမှာနေတဲ့ငွေတံဆိပ်နှင့်အတူပြန်ရောက်လာတယ်။
ဒီချန်ပီယံအကြောင်းကိုပိုမိုငါ့ကိုပြောပြပါ - အတွေ့အကြုံများ, ထိုစိတ်ခံစားမှု, Feodor Emilianenko ကဲ့သို့သောဒဏ္ဍာရီများ၏ရှေ့မှောက်၌စစ်တိုက်ခြင်းငှါခံစားချက် ..
ဒါဟာအကြီးအတှေ့အကွုံမြားခဲ့သည်။ ငါသည်ဤချန်ပီယံတစ်ဦးတော်တော်လေးအစိုင်အခဲပြင်ဆင်မှုလုပ်ငါရဲ့အကောင်းဆုံးပြသနိုင်ဖို့လုံးဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိန် ဆို. ပူဇော်။ ငါအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြံအစည်များနှင့်အနိုင်ရမယ့်ခိုင်မာတဲ့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အလံအောက်မှာယှဉ်ပြိုင်ရန်နှင့်ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအနေဖြင့်ပြိုင်ဘက်ရိုက်နှက်ဖို့ခံစားချက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်နှင့်ဤကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုး၏ရန်ပွဲစိတ်ဝိညာဉ်၏ညွှန်ပြဖြစ်ပါသည်။
ငါက Jeff Monson များကဲ့သို့အများအပြားကမ္ဘာကျော် MMA မှတိုက်လေယာဉ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကြောင်းဝမ်းသာပါတယ်, Feodor Emilianenkoအလက်ဇန္ဒား Emilianenko နှင့်ခန်းမ၌နေသောအခြားသူများက။ ငါအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တင်ဆက်ဖို့ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပေးတော်မူ၏။
ကျွန်မတစ်ဦးတည်းသာအတွေးနှင့်အတူတိုင်းစစ်တိုက်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်အနိုင်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်နှင့်ငါ့အစွမ်းအစ၌ယုံကြည်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ပြိုင်ဘက်ကိုလေးစားခြင်းနှင့်အနိုင်ရသည်အရှုံးတိုင်းကနေမှတ်စုယူပါ။ ခန္ဓာကိုယ်သင့်ရဲ့အားသာချက်များ၏ကန့်သတ်မှဦးဆောင်သည့်ကြီးမားစိတ်ဖိစီးမှု, အောက်မှာအခါမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကစားအတွက်ကအရေးပါအချိန်လေးထံသို့မရောက်ရ။ ထိုကဲ့သို့သောအချိန်လေးမှာတိုင်းတိုက်လေယာဉ်များ၏ psyche အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ သင်အများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ဖို့ရှိသည်တော့ဘူးဆက်လက် can`t လို့ခံစားရတဲ့အခါ, ထို့နောက်အောင်ခြင်းငှက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။
ငါနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနေ့စဉ်နှစ်ခုနှင့်လေးနာရီအကြားဖြုန်းနေကြတယ်။ ငါနှစ်ခု edition မှာအတွက်လေ့ကျင့်သောသူတို့၏နေ့ရက်ကာလအများစုဟာ။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါသည်လည်းသေးငယ်တဲ့ကလေးတွေသင်ပေး။ ငါ 5-6 နှစ်ပေါင်းထံမှအသက်အရွယ်မှာကလေးတိုင်းထိုသို့မဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုစတင်ရန်အသုံးဝင်သောကြောင်းထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်အမြိုးသားအသင်ပေးသောအားကစား, ဖြစ်ကြသည် ဂျူဒိုနှင့် sambo။ ဒီရူပဗေဒ၏တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုပေမယ့်သူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အသက်တာ၌သုံးပါစေခြင်းငှါအခြားအဖိုးတန်အရည်အသွေးတွေလည်းကလေးတစ်ယောက်စီအတွက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေမသာကြောင်းအားကစားများမှာထင်ပါတယ်။ အဆိုပါကလေးများလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေးသင်ယူကြသည်။ သူတို့ကယုံကြည်စိတ်ချမှု, Self-လေးစားမှု, အသိပညာ, သွက်လက်, အမြန်နှုန်းခွန်အားကိုခံနိုင်ရည်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အခြားသူများအများကြီးရရှိဆည်းပူး။ ကျွန်မကလေးတိုင်းကိုအပြည့်အသူ့ဟာသူဖွံ့ဖြိုးနိုင်စေဖို့အားကစားလုပ်နေသင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။
သင်တန်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲနှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုတလျှောက်, သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အချိန်ကိုရှာပါ။ သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ပြိုင်နက်တည်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိအောင်မြင်မှုရရန်အဘို့အနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သောသည်အဘယ်သို့ထင်သနည်း
တစ်ဦးချင်းစီပြင်ဆင်မှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီယှဉ်ပြိုင်ငါမပိုဆောင်းထောက်ခံမှုရှိသည်ကြောင့်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ငါ့အဘို့ပေးဖို့ရှိသည်အချို့ရန်ပုံငွေလိုအပ်သောကြောင့်ငါ, စီးပွားရေးအဘို့အချိန်ကိုရှာဖွေရပေမည်။ ငါသည်ဤ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်နယ်, ဒီပြဿနာအပေါ်လုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါမကိစ္စကြောင့်ဘာသူမ၏ / သူ၏အသက်တာအတွက်တစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်လိုလားတဲ့သူတိုင်းလူတစ်ဦးစွာကြိုးပမ်းရန်ရည်မှန်းချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရမယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာသူတို့နောက်ကိုလိုက်ရန်တိကျရှင်းလင်းသည့်အစီအစဉ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်တတိယ, သူတို့ကခြွင်းချက်မရှိသူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်ဖို့ရှိသည်။ ဤရွေ့ကား, ငါသည်လူတိုင်းရှိသည်နှင့်အောင်မြင်မှုရရန်အလို့ငှာကိုလိုက်နာသင့်တယ်ထင်သောအရာဖြစ်ကြ၏။
ဒီနရောမှာငါကအရမ်းအလုပ်ရှုပ်အစီအစဉ်ကိုရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်အသစ်တစ်ခုအားကစားကလပ်၏အဖွဲ့အစည်းအလွန်မကြာမီစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရာတှငျငါလူငယ်များအကြားတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအဆင့်မှာအားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လိမ့်မည်သည့်တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ငါနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်။ ငါအဘို့အကိုယ့်ကိုယ်ကိုခက်ခဲပြင်ဆင်နေသူဖြစ်ကြောင်းကိုလာမယ့်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပါသည်။ ငါသည်လည်းငါပွုသောအလုပ်, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တော်တော်လေးပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်၏, သို့သော်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းသောအခါအရာအားလုံး, ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်မအတွက်စေ့စပ်နေပါတယ်သောနယ်ပယ်များတွင်တိုးဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်သာရှေ့ဆက်သွားကြဖို့ကြိုးစားကြသည်။ ငါကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှငါ့ကိုလှည့်ပတ်လူတိုင်းအလိုရှိ၏။ ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကငါကအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
မာရီယို Dobrichkov အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
မာရီယို Dobrichkov ဖြင့် Video
Facebook တွင်မာရီယို Dobrichkov
တိုက်လေယာဉ်ပျံ, အားကစား | | rating:5/ 30